အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၉ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ - Xinhua News Agency
ဂျကာတာ ၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှား ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးသည် ဘာလီအပန်းဖြေကျွန်း မြောက်ဘက် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားကာ လူ ၉ ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေပြီး အခြားသူ ၆ ဦးအား ကယ်ဆယ်ထားကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသားအဆင့် ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးရုံး၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yusuf Latief က အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ညပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကုန်တင်သင်္ဘောမှ သင်္ဘောသား ၆ ဦးအား အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်တွင် အခြား LCT Depasena Dua သင်္ဘောတစ်စီးက ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယင်းဖြစ်စဉ်အား သတင်းပေးပို့ချက် ရရှိပြီးနောက် ဘာလီကျွန်းရှိ ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးရုံးသည် ရှာဖွေရေး နှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းအား ချက်ချင်းစတင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆင်ဟွာသို့ ဖုန်းဖြင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအား လာမည့်ရက်များအတွင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ပြီး KM Liberty 1 ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်ခြင်းသည် မုန်တိုင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
9 missing after cargo ship sinks in waters off Indonesia’s Bali
JAKARTA, Oct. 27 (Xinhua) — An Indonesian cargo ship sank in the northern waters off the resort Island of Bali with nine people missing and six others rescued, the Indonesian National Search and Rescue Office’s spokesman Yusuf Latief said here on Tuesday night.
After receivingareport on the accident which happened on Oct. 23, the search and rescue office in Bali immediately launchedasearch and rescue operation, he told Xinhua via phone.
The operation would continue within the next several days, he said, adding that storms were blamed for the sinking of the ship KM Liberty 1. Enditem
Photo – Photo taken on Oct. 3, 2021 showsaview of sunset at Sanur beach in Bali, Indonesia. (Photo by Byma/Xinhua)